चिनसंगको बन्दरगाहको दूरी कति ? - Arthapage
चिनसंगको बन्दरगाहको दूरी कति ?
प्रकाशित मितिः १० भाद्र २०७७, बुधबार ०९:०९ August 26, 2020
नेपाललाई चीनका चार सामुद्रिक र तीन वटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ ।
नेपाल र चीनबीच भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि अब नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न भारतकै समुन्द्री बन्दरगाह प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता पुस १६ गतेदेखि हटेको छ ।
नेपाल–चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा भएको समझदारीअनुसार नयाँ वर्ष २०२० देखि चीनका ४ समुन्द्री बन्दरगाह र तीन सुख्खा बन्दरगाह नेपालका लागि खुल्ला भएका हुन् ।
नेपाल र चीनबीच रसुवाको केरुङ्ग, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, हुम्लाको यारी, सुंखवासभाको किमाथाङ्का, मुस्ताङको नेचुङ ९कोरला० र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला गरी ६ वटा नाका भएर ब्यापार गर्न सक्ने समझदारी भएको थियो ।
तर, बन्दरगाहसम्मको पहुँच भने तत्कालका लागि हाल चल्तीको रसुवाको केरुङ्ग नाकाबाट मात्रै हुनेछ ।
गत आवमा नेपालले भारत र चीनसँगर्ब ७९ अर्बभन्दा धेरैको भयो भने चीनसँग २ खर्ब ७ अर्ब ६१ करोडको व्यापार मात्रै ११ खर्ब ८६ अर्बभन्दा धेरैको व्यापार गरेको थियो । नेपालको कुल व्यापार १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोडमध्ये भारतसँग मात्र ९ खभयो ।
नेपालले चीनका चार समुन्द्री बन्दरगाहबाट व्यापार अनुमति पाएसँगै झण्डै ४ खर्बको ९चीनसँग २ खर्बभन्दा धेरै र तेस्रो मुलुकसँग २ खर्ब ३२ अर्बभन्दा धेरै० व्यापार अब हिमाल छिचोलेर चीनीयाँ बन्दरगाहमार्फत गर्न बाटो खुलेको छ ।
नेपालले चीनीयाँ बन्दरगाह भएर तेस्रो देशसंग व्यापार गर्दा अनुमतिप्राप्त बन्दरगाहबाट सिगात्सेसम्म रेल सुबिधा प्रयोग गर्न सक्नेछ । सिगात्सेबाट केरुङ्ग हुंदै काठमाडौंसम्म भने सडकमार्फत कन्टेनरबाट व्यापार हुने छ ।
सडकमार्फत सिगात्सेबाट काठमाडौं आइपुग्न ७३४ किलोमिटर यात्रा गर्नु पर्ने छ । काठमाडौंबाट केरुङ्गसम्मको दुरी १ सय ८७ किलोमिटर छ भने केरुङ्गबाट सिगात्से पुग्न ५ सय ४८ किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ । यसका अलवा ती बन्दरगाह भएर नजिकको विमानस्थलबाट हवाइजहाजमा पनि नेपालले व्यापार गर्न सक्नेछ ।
नेपालले प्रयोग गर्ने सामुद्रिक बन्दरगाह
लियाङयुङ चीनको जिआङसु प्रान्तमा यो बन्दरगाह अवस्थित छ । यो बन्दरगाह पुग्न काठमाडौंबाट सडक मार्गमार्फत ४ हजार ६ सय ९१ किलोमिटर यात्रा गर्नु पर्छ भने हवाई मार्गको दुरी ३ हजार ३ सय २ किलोमिटर मात्रै पर्छ ।
बन्दरगाह सुरुआत हुदा निजी क्षेत्र उत्साहित
उत्तरी छिमेकी देश चीनको बन्दरगाह भएर तेस्रो मुलुकसम्म ब्यापारका लागि खोलेको मार्गले व्यावसायीहरु उत्साहित बनेका छन् ।
नेपाल चेम्बरअफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ चीनसँगको पारबहन सम्झौताले नेपालको ब्यापारमा ठूलो अर्थ राख्ने बताउँछन् ।
प्रकाशित मितिः १० भाद्र २०७७, बुधबार ०९:०९ |
Prevघरछेउ ठूला उद्योग तर रोजगारीका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता
Nextकोहलपुरको लकडाउनका विषयमा आज निर्णय हुँदै, मेयर खुकुलो बनाउनुपर्ने पक्षमा